Ikhabhinethi 1-Waterfront eLake Abanakee
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDuncan
Inkampu yakudala ye-Adirondack emi kwiihektare ezingama-37, enesiqingatha semayile elunxwemeni lwechibi elihle kwiLake Abanakee. Indawo eyonwabisayo yeholide yabantu abadala okanye usapho, enokuloba, ukukhwela intaba, ukubheqa, ukukhwela ibhayisekile, kunye nokuqubha kufumaneka kanye ngaphandle komnyango wekhabhathi yakho. Indawo yethu esembindini yeNtaba iAdirondack yenza uhambo lwemini lube lula ukuya kwiindawo zeOlimpiki zaseLake Placid, iGore Mountain, okanye i46 High Peaks. Indawo yokulala igcina ubumnandi, i-rustic ambiance yesimbo se-Adirondack.
Ikhabhinethi yoku-1 yindawo epholileyo enendawo enkulu yokungena yokundwendwela nosapho, ukonwabela umbono wechibi okanye ukufumana umsebenzi othile owenziwe emahlathini. Le khabhinethi inekhitshi eligcweleyo elinesitovu segesi kunye nesikhenkcisi esipheleleyo.
ILake Abanakee ikumntla-mpuma weChibi laseIndiya, eNew York. Iintlobo zeentlanzi ezikhoyo echibini yi-pike yasemntla, i-sucker emhlophe, i-smallmouth bass, i-largemouth bass, i-bullhead emnyama, i-perch emthubi, i-rock bass, kunye ne-sunfish. Idolophu yaseIndian Lake ineendawo zokutyela ezimbalwa, isikhululo segesi (iStewart's), ivenkile yehardware, kunye nendawo yokuhlamba impahla.
Ikhabhinethi yoku-1 ibekwe eLocke Harbour Cabins.
Umbuki zindwendwe ngu- Duncan
Ndiyafumaneka kwiindwendwe nge-app ka-Airbnb ukuba kukho imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo ngaphambi okanye ebudeni bohambo lwakho.